ကြာဇံဆီချက်လေး လုပ်စားဖြစ်လို့ အိမ်မှာလုပ်စားတဲ့နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ် အိမ်လုပ်ဆိုပေမဲ့ နံမည်ကြီး ဆိုင်တွေထက်တောင် အရသာက ပိုလို့တောင် ကောင်းနေပါသေးတယ် အပြင်စာထက် အိမ်မှာလုပ်စားရတဲ့ အရသာကို ပိုပြီးနှစ်သက်တဲ့ မာမာတို့အတွက်တော့ နတ်သုဒ္ဒါပါဘဲ။
၀က်သားကြိတ်ပြီးသား - 350g
ဆန်ကြာဇံ - 150g
ကြက်သားမှုန့် - လိုသလောက်
၀က်သားကို ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က် ကြက်သားမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်တို့နှင့် ရောပြီးနယ်ထားပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီးကြီး ၁၅မွှာလောက်ကို မညက်တညက်ထောင်းထားပါ
ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီကိုထည့်ပြီး ဆီပူလာတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းကို ထည့်ကြော်ပါ
ကြော်နေစဉ် အဆက်မပြတ်မွှေပေးပြီး ရွှေဝါရောင်သန်းလာတာနဲ့ ကြက်သွန်ကြော်များကို ဆယ်ပြီးအအေးခံထားပါ
ကြက်သွန်ကြော်ထားသော ဆီပူပူထဲကိုနှမ်းများထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ
နှမ်းစေ့ထည့်ပြီး မိနစ်ဝက်လောက်နေတာနဲ့ မီးပိတ်ပြီး လက်ကျန်ဆီအပူရှိန်နဲ့ နှမ်းကို မွှေးလာတဲ့ထိကြော်ပြီး အအေးခံထားပါ
၀က်သားကြိတ်သားကို ကြက်သားမှူန့် ဆားနှင့်နယ်ကာ ကွမ်းသီးဆံ အလုံးလောက်လေးတွေ လုံးထားပါ
ရေ 4cupsကို ဆူအောင်တည်ပြီး ရေပွက်ပွက်ဆူလာတာနဲ့ ၀က်သားလုံးများကို ထည့်ပြုပ်ပေးပါ
၄မိနစ်လောက်ပြုပ်ပေးပြီး ဆယ်ကာ ရေစစ်ထားပါ
၀က်သားလုံး ကျက်သွားပါက ခပ်သေးသေးလေးတွေ လှီးထားပါ
ဆန်ကြာဇံကို ရေနာရီဝက်လောက်စိမ်ထားပြီး ရေစစ်ကာ ရေစစ်ထားသော ကြာဇံများကို ဇလုံတလုံးထဲထည့်ပြီး ရေနွေးဆူဆူလောင်းထည့်ပါ
ရေနွေးစိမ်ထားချိန် ၂မိနစ်နေရင် ရေနွေးစိမ်ထားသော ကြကာဇံကို ဇကာထဲသွန်ချပြီး ရေနှေစ်ထပ်လောက်ဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
ကြက်သွန်ဖြူကြော် နှမ်း ကြော်ပြီးသားကို ပြင်ထားပါ
ပြုပ်ထားသော ကြာဇံကို တပွဲစာယူပြီး ဇကာထဲထည့်ကာ ရေနွေးထဲ ခနလေးစိမ်ပြီး ပြန်ဆည်ကာ ရေစစ်ပြီး ပန်းကန်ထဲထည့်ပေးပါ
အနေတော် လှီးထားသော ၀က်သားလုံး နှစ်သက်သလောက် အရသာမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က် မြေပဲမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း နှမ်းဆီချက် ထမ်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲ ငံပြာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်သာသာ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် အဖတ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းနှင့် ကြက်သွန်မိတ်တို့ထည့်ကာ ကြက်ရိုးဟင်းခါး ကြက်သွန်ချဉ်လေးတို့ နှင့်တွဲဖက်ကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 6:47 am 1 comment:
ကြက်ဥချဉ်ရည်ဟင်းကို အမျိုးမျိုးချက်ကာ စားကြတဲ့အထဲက ဒီချက်နည်းလေးက ကြက်ဥကို ကြော်ပြီးမှ ပြန်ချက်တဲ့ နည်းလေးပါ ချက်နည်းကတော့ အရင် ကြက်ဥချဉ်ရည်ဟင်း ချက်နည်းအတိုင်းအတိုင်းပါဘဲ ကြက်ဥကို အလုံးလိုက် ဖောက်ပြီး ကြော်တဲ့ ချဉ်ရည်ဟင်း ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အလုံးလိုက်ဖောက်ကြော်ထားသော ဘဲဥ( သို့) ကြက်ဥ - ၆လုံး
ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၇ ဇွန်း
ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီကိုထည့်ပြီး အပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ကြက်ဥများကို တလုံးခြင်း ဖောက်ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ
ကြက်ဥကြော်ထားသော ဆီထဲမှာဘဲ ထောင်းထားသော ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူ ချင်း ငရုတ်သီးမှုန့်တို့ထဲ့ကာ မွှေးလာတဲ့ထိ ဆီသတ်ပေးပါ
ငရုတ်သီးနံ့မွှေးလာတာနဲ့ အာလူးကိုထဲ့ပြီး ငါးငံပြာရည် တခါထဲထဲ့ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ
ငံပြာရည်နံ့သင်းလာပြီး အာလူးအရောင်ပြောင်းလာတာနဲ့ ရေမြုပ်အောင်ထဲ့ပြီး အရသာမှုန့်နှင့် ဆားထဲ့ကာ အာလူးနူးအောင်တည်ပေးပါ
အာလူးနူးလာတာနဲ့ ကြက်ဥကြော်ပြီးသားကို အရင်ထည့်ကာ မကျီးသီးမှည့်အရည်ထဲ့ပြီး ရေဆူအောင် ဆက်တည်ပြီး ဆီကျန်ရေကျန်ထားပြီး မဆလာအုပ်ကာ မီးပိတ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:30 am No comments:
ငါးခြောက်ထဲမှာ ငါးယောင်ခြောက်ပြီးရင် အသားအများဆုံး ငါးခြောက်တမျိုးပါ ဆီကျန်ရေကျန် ချက်စားလဲ အဆင်ပြေတဲ့ ငါးခြောက်ပါ မာမာကတော့ စပ်စပ်လေးကြော်ပြီး ထားလိုက်တာမို့ ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ငါးခြောက် - 400g
ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၁၀မွှ
ဆီ - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန် တလုံးသာသာ
အေးသွားပါက ကြွတ်ပြီး မွှေးနေသော ငါးခြောက်ကြော် စပ်စပ်လေးကို လိုသလို စားနိူင်ပါပြီ။
ပဲကြာဇံသုပ်လေး သုပ်စားဖြစ်လို့ သုပ်နည်းလေးနဲ့အတူ ပဲကြာဇံသုပ် ပို့ခဲ့ပါပြီ ထမင်းနဲ့ဘဲစားစား ဒီအတိုင်းဘဲ စားစား အရမ်းကောင်းတဲ့ ပဲကြာဇံသုပ် ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ်လေး သုပ်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ရေနာရီဝက်လောက် စိမ်ပြီး ရေနွေး တမိနစ်လောက်ဖျောပြီး ရေစစ်ထားသော ပဲကြာဇံ - 100g
ရေနာရီဝက်လောက် စိမ်ပြီးရေစင်အောင်ဆေးထားသော မှိုခြောက် - 30g
ပါးပါးလှီးထားသော ဂေါ်ဖီ - လက်ဖက်ရည်ပန်းကန် တလုံးစာ
ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တခြမ်း
ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
ပဲအကျက်မှုန့်. - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တဝက်သာသာ
ပဲကြာဇံကို ရေနွေးဖျောပြီး ရေအေးနှင့်ဆေးကာ ဇကာနှင့်စစ်ထားပါ
မှိုခြောက်ကို ရေစိမ်ပြီး ရေစင်အောင်ဆေးကာ ရေနွေးဆူဆူနှင့် ၂မိနစ်လောက်စိမ်ကာ အနေတော်လှီးထားပါ
ဇလုံကျယ်ကျယ် တလုံးထဲမှာ ပဲကြာဇံ မှိုခြောက် ဂေါ်ဖီ ကြက်သွန်နီ ပဲမှုန့် ငရုတ်သီးမှုန့် ဆီချက် ငံပြာရည် ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် အရသာမှုန့် နံနံပင် သံပုရာရည်တို့ကို ထည့်ပြီး ခပ်ဖွဖွနယ်ပေးကာ အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ကာ သုံးဆောင် နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 7:51 am 1 comment:
Posted by Tuumar at 12:57 pm 1 comment:
ဘဲသားဆန်ပြုပ် ပြုပ်သောက်ဖြစ်လို့ ပြုပ်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ် ဒီဆန်ပြုပ်ကိုလဲ အရင်ပြုပ်ဖူးတဲ့ ကြက်သားဆန်ပြုပ်နည်းအတိုင်း ဆန်လှော်နဲ့ဘပြုပ်ထားတာပါ
ရေဆေးပြီး ရေမထဲ့ဘဲ ညိုတဲ့ထိလှော်ထားသောဆန် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး ၂ဗူး
အရိုးအသားတွဲထားသော ဘဲသား - 350g
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ဇွန်းး ( ဇွန်းတ၀က်ကို ဘဲသားပြုပ်ထဲထည့်ရန်)
အရသာမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်းခွဲ (တ၀က်ကို ဘဲသားပြုပ်ထဲ့ထည့်ရန်)
ဘဲသားကို အတုံးလိုက်ရေဆေးပြီး ချင်း ဆားနှင့်နယ်ကာ နူးအောင်ပြုပ်ပေးပြီး အရိုးအသား သတ်သတ်စီ ထွင်ပေးပါ
ကြက်သွန်များပျော့ပြီး မွှေးလာပါက ဘဲ အရိုးအသားများကို ထဲ့ပြီး ၅မိနစ်လောက် ဆီသတ်ပေးထားပါ
ဆန်နူးပြီဆိုပါက ရေကိုတရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် ၆လုံးစာလောက်ထဲ့ပေးပြီး ကြက်သွန်ဥလေးများနှင့် ဘဲသားဆီသတ်ကို ထဲ့ပြုပ်ပေးပါ
လိုအပ်သော အရသာပြင်ပေးပြီး ကြက်သွန်ဥလေးများ နူးလာပါက ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုထဲ့ပြီး မီးနွေးနွေးနဲ့ထားပြီး လိုသလောက်ထဲ့သောက်ကာ သောက်ကာနီးမှ ကြက်သွန်မိတ်ဖြူးပြီးသောက်နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:10 am 1 comment:
ရံဖန်ရံခါမှ စားတတ်ပေမဲ့ ၀က်နံရိုးဟင်းက ချက်တတ်ရင် အရမ်းစားလို့ကောင်းတာမို့မာမာချက်တဲ့ နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၀က်နံရိုး - 500g
ကြက်သွန်ီ - အနေတော် တလုံး
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မောက်မောက်တဇွန်း
၀က်နံရိုးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး တလက်မလောက် အတုံးလေးများ တုံးပေးထားပါ
၀က်နံရိုးများကို ဇလုံတလုံးထဲထည့်ပြီး နနွင်း ဆား ငံပြာရည် အချိုမှုန့်တို့နဲ့ နယ်ပြီး အရသာဝင်အောင် ၁၀မိနစ်လောက် နှပ်ထားပါ
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆို ဇောက်နက်သော အိုးကိုအပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ
၀က်နံရိုးအသားများ မာလာမှ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ
ပထမ တရည်ခမ်းပြီး နောက်တရည် ထပ်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 10:48 am2comments:
ဂေါ်ရခါးသီးဆို ဟင်းချက်စား ကြော်စား ပြုပ်တို့ အရသာစုံအောင် လုပ်စားလို့ရတာမို့ ဒီတခါတော့ ကြက်ဥနဲ့မွှေကြော် ကြော်ထားပါတယ် သဘာဝအရသာက ချိုပြီးသားမို့ အများကြိုက်ကြတဲ့ အသီးကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Posted by Tuumar at 10:41 am 1 comment:
ပဲပေါင်းလုပ်နည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ် ပဲကြီးဟင်းချက်တဲ့ ပဲကို နူးနေအောင် ပြုပ်ပြီးလုပ်ထားတာပါ တခြားပဲတွေကို လုပ်လို့ရပေမဲ့ ဒီပဲလောက် အရသာမကောင်းလှပါဘူး ကလေးလူကြီး နှစ်သက်မဲ့ ပဲပေါင်းဟင်းမို့လို့ ပဲပေါင်း စိမ့်စိမ့်လေး လုပ်စားနိူင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ပဲကြီး LIMA BEEANS - 500g
ဆီ - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန်တလုံး
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်သာသာ
ပဲရဲ့အထက် ရေလက်တထွာလောက် ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး တညရေစိမ်ထားပါ
နောက်နေ့မနက်မှာ ပဲများပွလာပါက အခွံကို တစေ့ချင်းထွင်ပေးပါ
အားလုံးပြီးတာနဲ့ ဇောက်နက်နက်အိုးထဲမှာ ထည့်ပြီး နူးအောင်ပြုပ်ပေးပါ
ပဲများ နူးအိလာပါက ဇွန်းနှင့် ဖိပြီးချေထားပေးပါ
ဒယ်အိုးတလုံးထဲမှာ ဆီထည့်ကာ အပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ နနွင်းမှုန့်ထည့်ပြီ ကြက်သွန်နီကို ထည့်ကြော်ပြီး ကြွတ်လာတာနဲ့ ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ထားပါ
ကြက်သွန်ကြော်လို့ ပိုတဲ့ဆီထဲမှာ ပြုပ်ပြီး ချေထားသော ပဲများကို ထည့်ကြော်ပေးပါ
ပဲများကို အဆက်မပြတ်မွှေပေးပြီး ဆားနှင့် အချိုမှုန့်တို့ ထည့်မွှေပေးပါ
ပဲများအိလာပြီး မွှေးလာပြီဆိုတာနဲ့ ကြော်ထားသော ကြက်သွန်နီကြော် ကို ပဲပေါင်းအပေါ်မှဖြူးပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
အာဗျဲခြောက် (ငါးနှပ်ခြောက်) အစပ်ကြော်
အာဗျဲခြောက်ဆိုရင် တချို့က အနံ့မကြိုက်လို့ မစားကြပါဘူး အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ ငရုတ်သီး ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီတို့နဲ့ ကြော်ကြည့်စေချင်ပါတယ် မောင်ကြံ တတို့ ဖြစ်မှ သေချာပါတယ်။
အာဗျဲခြောက် - 100g
Posted by Tuumar at 6:53 am 1 comment:
ကြက်ဥချဉ်ရည်ဟင်းကို အမျိုးမျိုးချက်ကာ စားကြတဲ့အထဲက ဒီချက်နည်းလေးက ကြက်ဥကို ပြုပ်ပြီး အခွံခွာကာ အလုံးလိုက် ကြော်ပြီးမှ ပြန်ချက်တဲ့ နည်းလေးပါ ချက်နည်းကတော့ ကြက်ဥကို ကြော်ပြီးမှ ချက်တာကလွဲရင် ချက်နေကျ နည်းအတိုင်းဘဲ ချက်ထားပါတယ်။
ပြုပ်ပြီးအခွံခွာကာ ထားသောဘဲဥ( သို့)ကြက်ဥ - ၆လုံး
ဆီပူလာတာနဲ့ ကြက်ဥများကို အပေါ်ယံတင်းသွားအောင် ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ
ကြက်ဥကြော်ထားသော ဆီထဲမှာဘဲ ထောင်းထားသော ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူ ချင်း ငရုတ်သီးမှုန့်တို့ထဲ့ကာ မွှေးလာတဲ့ထိဆီသတ်ပေးပါ
အာလူးနူးလာတာနဲ့ဘ ကြက်ဥကြော်ပြီးသားနဲ့မကျီးသီးမှည့်အရည်ထဲ့ကာ ရေဆူအောင် ဆက်တည်ပြီး ဆီကျန်ရေကျန်ထားပြီး မဆလာအုပ်ကာ မီးပိတ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 1:12 pm 1 comment:
သရက်သီးစိမ်းသနပ် လုပ်နည်းလေး မေးထားလို့ သရက်သီးကလဲ မာမာနေတဲ့ နိူင်ငံမှာ ပေါ်ကာစ အသီးက သိပ်မကြီးသေးလေတော့ သရက်သီး ခပ်သေးသေးလေးတွေနဲ့ဘဲ သရက်သီးစိမ်း သနပ်လုပ်ပြီး လုပ်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တယောက်နဲ့တယောက် လုပ်ပုံလုပ်နည်း တူချင်မှ တူပါလိမ့်မယ် မာမာကတော့ စိတ်ထဲမှာ အရိုးစွဲနေတဲ့ မာမာ့အမေ လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ဘဲ လုပ်ထားပါတယ် စားလို့ကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ် သရက်သီးသနပ် တမျိုးထဲနဲ့ကိုဘဲ ထမင်းစားလို့ရအောင် ကောင်းပါတယ်။
သရက်သီးစိမ်း အသေး - ၅လုံး 150g ခန့်
ကြက်သွန်ဖြု - ၇မွှာ
လေးညှင်း - ၁ပွင့်
စမုံစပါး - အစေ့ ၂၀ခန့်
သစ်ဂျပိုးခေါက် - အနည်းငယ်
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
စမုံစပါး လေးညှင်း သစ်ဂျပိုးခေါက် အလွယ်တကူမရှိလျှင် ရိုးရိုးမဆလာကို သုံးနိူင်ပါတယ်
သရက်သီးကို မခွံမခွာပဲ အညှာမှဖြတ်ကာ ရေတနာရီလောက် စိမ်ထားပါ
ရေစိမ်ပြီးမှ အနေတော် အတုံးလေးများ တုံးပေးပါ
မနက်ဖြန်မနက် သရက်သီးသနပ် လုပ်မယ်ဆို တရက်ကြိုပြီး လှီးထားပေးပြီး ပန်းကန်တခုထဲ ထည့်ထားပေးပါ
သစ်ဂျပိုးခေါက် စမုံစပါး လေးညှင့်ပွင့်ကို အနည်းငယ်လှော်ပြီး ထောင်းကာ မဆလာ လုပ်ထားပါ
သနပ်လုပ်ရန် စပ်ထားသော မဆလာကို ပြင်ထားပါ
ဆားကို နည်းနည်း ညိုသွားအောင် လှော်ပြီး အအေးခံထားပါ
ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံခွာပြီး အစိတ်စိတ်ထားပါ
ဇလုံတလုံးထဲမှာ သရက်သီး ဆား မဆလာ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို ရောမွှေထားပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ မီးဖိုပေါ်မှ ဖယ်ကာ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့်ထည့်ပြီး မွှေထားပါ
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် ထည့်ထားသော ဆီကို ခပ်နွေးနွေးအချိန်မှာ သရက်သီးဇလုံထဲ လောင်းခိပြီး မွှေပေးပါ
အားလုံး သမသွားတာနဲ့ ပုလင်းသန့်သန့်ထဲ သရက်သီးကို ဆီမြုပ်အောင်ပြီး အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ထားပါ
၃ရက်မှ၎ရင်အတွင်း ရရင် အထက်အောက် မွှေပေးပြီး စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 4:18 pm 1 comment:
ပုဇွန်ချဉ်စားချင်လို့ ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေလွန်းလို့ ပုဇွန်ချဉ်လုပ်နည်းနဲ့ သုပ်နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ပုဇွန်ဘော့ချိတ် သို့ ပုဇွန်ခေါင်းချိုး - သန့်စင်ပြီးသား 200g
ခပ်မာမာချက်ထားသော ထမင်း - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန် ၂လုံး
ဆား - ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း
ပုဇွန်ကို အခွံမခွာဘဲ ခေါင်းဘဲဖြုတ်ပေးပါ
အားလုံးသန့်စင်ပြီးပါက ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ရေခြောက်အောင် paper towel နှင့်သုပ်ပေးပါ
ထမင်းကို ခပ်မာမာချက်ပေးပြီး အအေးခံထားပေးပါ
ထမင်းအေးတော့မှ ပုဇွန်ချဉ်ကို စတင်ပြင်ဆင်ပေးပါ
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ ဇလုံထဲထည့်ပြီး ဆား ထမင်းနှင့် ပုဇွန်တို့ကို နယ်ပေးပါ
နယ်ပြီးသောပုဇွန်ကို ပုလင်းသန့်သန့်ထဲ ဖိသိပ်ပြီး ထည့်ပေးပါ
အပေါ်မှာ နေရာလွတ်နေပါက အသုံးမပြုရသော ပလစတစ်စများ ထိုးထည့်ပြီး ဗူးဖုံးကို လုံအောင်ပိတ်ထားပါ
မာမာကတော့ ပုလင်းကို အပြည့်သိပ်ထည့်ထားတဲ့အတွက် ပလစတစ်စများ မထည့်ဘဲ ထားပါတယ်
ပုဇွန်ထည့်ထားသော ပုလင်းကို အိမ်မှာ အခန်းအပူချိန် အများဆုံးရှိတဲ့ မီးဖိုဆောင်အခန်းမှာ ထားပေးပါ
၃ရက်လောက်နေရင် အရည်များ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ထွက်လာတဲ့အရည်ကို ဗူးမှောက်ပြီး စစ်ထားပေးပါ
ပုဇွန်ချဉ်ကို ပုလင်းထဲက ထုတ်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီကို ခပ်ပါးပါးလှီးပြီး ရေဆေးကာ ရေစစ်ထားပါ
ငရုတ်သီးစိမ်း စားနိုင်သလောက် လှီးထားပါ
နံနံပင်ကို ကြိုက်သလောက် လှီးထားပါ
ဇလုံတလုံးထဲမှာထည့်ပြီး ပဲဆီ ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း ဆမ်းပြီး နယ်ပေးပါ
ပုဇွန်ချဉ်မှာ အငံပါပြီးသားမို့ ဆားထည့်ရန်မလိုပါ။
Posted by Tuumar at 2:47 pm 1 comment:
ဟင်းအမယ် တမျိုးထဲ ချက်မယ်လို့ စိတ်ကူးတဲ့နေ့ဆိုရင် အခုလို ချိုချဉ်ကြော်လေး ကြော်တတ်ပါတယ် အပြင်အစာတွေ သိပ်မစားတတ်လေတော့ အခုလို တွေးရင်တောရင်း ပေါ်လာတတ်တဲ့ ချိုချိုချဉ်ချဉ်လေးက ထမင်းကို မထင်မှတ်ဘဲ မိန်စေတတာတာမို့ ကြော်စားနိူင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သန့်စင်ပြီး ခပ်ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သား - 150g
အရှည်လိုက် လှီးထားသော မုံလာဥနီ - အနေတော် တဥ
အနေတော်လှီးထားသော ပဲသီး - ၁ုတောင့်
တလက်မစီလောက် လှီးထားသော တရုတ်နံနံ - ၂ပင်
ပြောင်းကော်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး - ၅လုံး
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း
ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်း (ချိုချဉ်ကြော်ရန် )
သစ်ရွက်ဆီ လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံးတလုံး( ကြက်သားကြော်ရန် )
ကြက်သားကို ပြောင်းကော်မှုန့် ထမင်းစားဇွန်းတဇွန်း ရေအနည်းငယ်နှင့် ခပ်ပြစ်ပြစ် နယ်ထားပါ
ဆီကို အပူပေးပြီး ကြက်သားကို ဇွန်းနှင့်ခပ်ပြီး တတုံးခြင်းကြော်ပေးပါ
ရွှေဝါရေင် သန်းလာလျှင် ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီကို အပူပေးပြီး ဆီပူလာတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကို မိနစ်ဝက်လောက်ကြော်ပေးပါ
မိနစ်ဝက်ပြည့်တာနဲ့ မုံလာဥနီ နှင့်ပဲသီးတို့ကို ထည့်ပြီး တမိနစ်လောက် ကြော်ပေးပါ
တမိနစ်လောက် ကြော်ပြီးတာနဲ့ ကြက်သားကြော် ဆား သကြား ခရမ်းချဉ်သီးဆော့တို့ထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ
ကြော်ချိန် တမိနစ်လောက် ရပြီဆိုတာနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် တရုတ်နံနံတို့ ထည့်မွှေပေးပြီး ချိုချိုချဉ်ချဉ် အစိမ်းကြော်လေးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:14 pm No comments:
ဟင်းရည်ပွက်ပွက်ဆူပါက. ရုန်းပတေသီး ဆားနှင့် အရသာမှုန့်ထည့်ပြီး အရသာကို လိုသလိုပြင်ကာ သုံးဆောင်နိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:49 pm No comments:
သန့်စင်ပြီး ရေစင်အောင်ဆေးထားသောငါးပြေမကို ဇလုံကျယ်ကျယ်ထဲထဲ့ပါ
ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာနှင့်ငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်းတဇွန်းတို့ထဲ့ပါ
Posted by Tuumar at 9:06 pm No comments:
ငါးသေတ္တာ - ဗူးကြီး တဗူး
အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ အကွင်းလိုက်လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - ကြီးကြီး တလုံး
ကြက်သွန်နီ နွမ်းတာနဲ့ ငါးသေတ္တာနှင့် ဆားတို့ထည့်ပြီး ရေအနည်းငယ်ထည့်ကာ ရေဆူအောင်တည်ပါ
ရေဆူလာတာနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးထည့်မွှေပြီး တမိနစ်လောက် တည်ပေးရင် ရပါပြီ။
ခရမ်းသီးနှပ်ဆိုရင် ထမင်းမိန်ရာ ဟင်းတမျိုးလို့ ထင်နေမိလို့ ခရမ်းသီးရတိုင်း နှပ်ချက်လေး ချက်ပြီး စားဖြစ်တာက များပါတယ် အခုတော့ ထောပတ်ခရမ်းသီးကို ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ နှပ်ထားလို့ ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
နူတ်နူတ်စဉ်းထားသော ကြက်သွန်နီဥကြီးကြီး - တဥ
နူတ်နူတ်စဉ်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၃မွှာ
ခရမ်းသီးနူးပါက အရသာမြည်းပြီး ဆီကျန်ရေကျန်ချိန် မီးပိတ်ပေးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 8:38 pm No comments:
သဘာဝအချိုအရသာနဲ့ ပြည့်ဝနေတဲ့ ပြောင်းဖူးထောင်းကြော် ကြော်စားဖြစ်လို့ ကြော်နည်းနဲ့အတူ လာပို့ခဲ့ပါပြီ မာမာကတော့ ငရုတ်ဆုံထဲမှာ ညက်နေအောင် စိတ်ရှည် လက်ရှည်ထောင်းထားပေမဲ့ အချိန်မရလို့ မထောင်းနိုင်ရင် ဗလင်ဒါထဲ ထည့်ပြီးကြိတ်နိူင်ပါတယ်။
ပြောင်းဖူး - တရုတ်ဟင်းရည်သောက်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ (အစေ့ထွင်ပြီးသား )
ရေ - ပြောင်းဖူးမြုပ်အောင် ထည့်ပါ
ဆီပူပူမှာ ထောင်းထားတဲ့ ပြောင်းဖူးထောင်းနှင့်ဆားကို ထည့်ပြီးမွှေပေးပါ
ပြောင်းဖူးစေ့ထည့်ပြီး တမိနစ်လောက်ရတာနဲ့ ဆားနှင့်ရေကိုထည့်ပြီး တည်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 8:27 pm 1 comment:
ကြက်ဟင်းခါးသီးကို အမျိူးမျိုးလုပ်စားကြတဲ့အထဲက ဒီတခါတော့ ပုဇွန်အစိုကို ထောင်းပြီး ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ ကြော်ထားလို့ ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီး - ခပ်ကြီးကြီး ၂လုံး
ပုဇွန်အစို - ပုဇွန်ထုတ် ခပ်ကြီးကြီး ၃ကောင်
နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံတပုံ
ပါးပါးရိတ်ရိတ်လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တခြမ်း
နုတ်နုတ်စဉ်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၃မွှာ
ဟင်းအိုးကို မမွှေဘဲ လှုပ်လှုပ်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 7:46 pm No comments:
Labels: ကြက်ဟင်းခါးသီး စားဖွယ်ရာများ
ပြီးတာနဲ့ ကြာဇံထဲ့ပြီးရောကြော်၍ ကြာဇံပျော့လာပြီဆိုတာနဲ့ဘေးကိုတွန်းထားပြီး ကြက်ဥကိုဖောက်ထည့်ကာ အနှစ်ဖောက်ပြီး တ၀က်ကျက်အောင်ကြော်ပြီး တရုတ်နံနံ ထည့်အားလုံးကို ရောမွှေကာ အရသာမြည်းပေးပါ အရသာအနေတော်ဆိုရင် ကြာဇံကြော်လေးရပါပြီ
ပျော့သွားအောင် ပြုပ်ပြီး ရေဆေးကာ ရေစစ်ထားသော ကြက်ဥ ခေါက်ဆွဲအပြား - 100g
တလက်မခန့်အရွယ် လှီးထားသော တရုတ်နံနံ - ၂ခက်
နှမ်းဆီ - လက်ဖက်ဇွန်း သုံးပုံ တပုံ
ရေနွေး 8cups လောက်ကို ဆူအောင်တည်ပေးပြီးမှ ခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ထည့်ပြုပ်ပေးပါ
အသားမစားချင်တဲ့ရက်ဆို ကြက်ဥကိုပြုပ်ပြီး သုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေတဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေး ဖြစ်သွားတတ် သလိုပါဘဲ ပဲဆီစိမ်းရဲ့ အနံ့မွှေးမွှေးလေးက ထမင်းကို မိန်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြက်ဥသုပ်နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က် မရှိတရှိ
ကြက်ဥကို ကျက်အောင်ပြုပြီး အခွံခွာကာ ခပ်ထူထူလှီးထားပါ
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ ခပ်ပါးပါးလှီးပြီး ရေတထပ်ထပ်ဆေးပါ
ဇလုံတလုံးထဲမှာ ကြက်ဥ ကြက်သွန်နီ ဆား အချိုမှုန့် ဆီတို့ထည့်ပြီးခပ်ဖွဖွ နယ်ပေးပါ
အားလုံးသမသွားပါက အရသာမြည်းကာ ကြက်ဥသုပ် မွှေးမွှေးစိမ့်စိမ့်လေးကို စားပွဲပြင်နိူင်ပါပြီ။
မိသားစုအကြိုက် သားသတ်လွတ်ဟင်းလေးပါ ပြောင်းဖူးဆို ပြုပ်လဲကြိုက် ကြော်လဲကြိုက် မီးဖုတ်ရင်လဲကြိုက်ကြလေတော့ အမျိုးစုံအောင် လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် ပြောင်းဖူးကို လက်ဖက်လေးနဲ့ရောပြီး သုပ်စားရင်လဲ စွဲမက်စရာပါ။
အရမ်းကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ဟင်းတစ်မျိုးရနိူင်ပြီး အကုန်အကျနဲသလောက် ထမင်းမိန်တဲ့ ဟင်းတစ်မယ်ပါ ချိုစိမ့်စိမ့်လေးမို့ အကြိုက်တွေ့စေဖို့ ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ ခပ်သေးသေး - တခြမ်း (ပါးပါးလှီးထားပါ )
နနွင်းမှုန့် -လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ
ဆီပူပူမှာ နနွင်းမှုန့်ကို အရင်ထဲ့ပြီး ကြက်သွန်နီကို ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန် နွမ်းသွားမှ ပြောင်းဖူးစေ့ကို ဆားထည့်ပြီး မွှေပေးပါ
အားလုံရောမွှေပြီး နှစ်မိနစ်လောက်ကြော်ပေးပြီး အရသာမြည်းကာ လိုသလိုပြင်ပေးပြီး စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 8:08 am 1 comment:
ကင်းမွန်ငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းခွဲ
Posted by Tuumar at 7:29 am No comments:
အသားမလိုဘဲ ပုဇွန်ငါးပိနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီချဉ်ရည်လေး စားကောင်းလွန်းလို့ ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အခက်ချွေထားသော ပန်းဂေါ်ဖီ - တပွင့်
အနေတော်လှီးထားသော မုန့်ညှင်းစိမ်း - တပင်
ဟင်းချိုမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း
ပုဇွန်ငါးပိ - ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်
မကျည်းသီး အနှစ် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း
ညက်နေအောင်ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး၂မွှာ
ရေဆူလာပါက. ပုဇွန်ငပိကို အရည်ဖျော်ကာ မကျီးမှည့်အနှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းနှင့် အတူထဲ့ပြီး ရေပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 7:08 pm 1 comment:
ထမင်းမိန်မိန် သုံးဆောင်နိုင်ဖို့. လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး ချက်ရလွယ်တဲ့ ကြက်အသည်းအမြစ် ချိုချဉ်အစိမ်းကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်
သန့်စင်ပြီး ခပ်ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်အသည်းအမြစ် - 150g
အနေတော်လှီးထားသော ဘရိုကိုလီ - ၁၀ ခက်
ထက်ဝက်ပိုင်းထားသော ရွှေပဲသီး - ၄တောင့်
ဆီကို အပူပေးပြီး ဆီပူလာတာနဲ့ ကြက်အသည်းအမြစ်ကို ထည့်ကြော်လိုက်ပါ
ကြက်အသည်းအမြစ် မာလာတာနဲ့ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ရေခမ်းတဲ့အထိ တည်လိုက်ပါ
မိနစ်ဝက်ပြည့်တာနဲ့ မုံလာဥနီ မှို ဘရိုကိုလီတို့ကို ထည့်ပြီး တမိနစ်လောက် ကြော်ပေးပါ
တမိနစ်လောက် ကြော်ပြီးတာနဲ့ ဆား သကြား တို့ထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ
ကြော်ချိန် တမိနစ်လောက် ရပြီဆိုတာနဲ့ရွှေပဲသီး ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် တရုတ်နံနံတို့ ထည့်မွှေပေးပြီး ချိုချိုချဉ်ချဉ် အစိမ်းကြော်လေးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 6:33 pm No comments:
Sea Food ဟင်းချို
ချဉ်စပ်လေး စားချင်စိတ်ပေါ်လာတိုင်း အခုလို ချဉ်ငံစပ်လေးတွေ ချက်သောက်ဖြစ်ပါတယ် ချက်နည်းကတော့ အသီးအရွက် လျှော့ထည့်တာကလွဲရင် တုန်ယမ်းဟင်းချက်နည်းနဲ့ အတူတူပါဘဲ။
Tom Yum ဟင်းချက်အနှစ် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
မုံလာဥနီ - အနည်းငယ် ( ရေဆေးပြီး အရှည်လိုက် လှီးထားပေးပါ)
ရေဆူလာပါက ပုဇွန် ကင်းမွန် fish cake ဆားတို့ထည့်ပြီး ၂မိနစ်လောက် တည်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ဆား အရသာမှုန့် ကြာဇံ ပဲပြားတို့ထည့်ပြီး တမိနစ်လောက် ရေဆူပါစေ
အားလုံးပြီးတာနဲ့ မိနစ်ဝက်လောက် ရေဆူစေပြီး ချဉ်ငံစပ် ဟင်းချိုလေး ရပါပြီ
အာပူလျှာပူ ( မုန့်တီ )
ဂျုံကြာဇံ ဟင်းခါး (အလှူဟင်းခါးး)
သရက်သီး ရွှေလံဘိုငရုတ်သီးစိမ်း ပုဇွန်လှော်ထောင်း ငါ...
ဆယ်လမွန်ငါး အချဉ်ဆီကျန် ရေကျန်
black tomato ချဉ်ငံစပ်အသုပ်